Imibhalo kaMohsin Ali ivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge Mohsin Ali
UMohsin ungumeluleki nothisha enhliziyweni. Useneminyaka eyishumi ekulo mkhakha, esiza abantu ukuthi bafeze izinhloso zabo ngokumaketha kwedijithali. Akukhona nje ukuthola ithrafikhi eningi noma ukuguqula kangcono - kumayelana nokwenza isiqiniseko sokuthi uyakwazi ukuxhumana nomlayezo wakho ngempumelelo ukuze izethameli zakho ziqonde ukuthi yini oyidingayo ukuba zenze!
Izinyathelo Ezi-5 Zokudala Isu Lokukhangisa Lokuqukethwe Okuphumelelayo
NgoLwesithathu, Februwari 2, 2022 NgoLwesithathu, Februwari 2, 2022 Mohsin Ali
Ukuthengisa okuqukethwe kuyindlela ekhula ngokushesha nesebenza ngempumelelo kakhulu yokumaketha ibhizinisi lakho, kodwa ukwakha isu lokuwina kungaba nzima. Iningi labakhangisi bokuqukethwe lidonsa kanzima ngamasu abo ngoba abanayo inqubo ecacile yokuyidala. Bachitha isikhathi ngamasu angasebenzi esikhundleni sokugxila emasu asebenzayo. Lo mhlahlandlela uveza izinyathelo ezi-5 ozidingayo ukuze uzenzele isu lakho lokuwina lokumaketha okuqukethwe ukuze ukhulise ibhizinisi lakho